Dalka Danmark oo xiratay xaduudaheeda Caabuqa Corona awgiisa. – Xogsoor News Network
DEGDEG:Kenya oo ciidamo soo dhoobtay Mandheera
Dowladda Danmark ayaa xalay fiidkii ku dhawaaqday in guud ahaan ay xirtay xaduudaha dalkeeda, waxayna sheegtay in dalka keliya ay soo geli karaan dadka u dhashay. Shisheeyaha kalana laga doonayo in ay la yimaadaan sabab cad oo muhiim ah oo ay ku doonayaan in ay ku galaan dalkaasi.
Mette Fredriksen, ra’iisal wasaaraha dalka Danmark oo shir jaraa’id qabatay ayaa ku sheegtay in ujeedka loo xiray xaduudaha dalkaasi tahay in la xakameeyo faafista caabuqa Coronavirus oo Danmark ka mid tahay dalalka uu ka jiro.
Haddaba go’aankan ayaa lama filaan ku noqday hay’adda gaadiidka Sweden, maamulka buundada xiriirysa Sweden iyo Danmark ee Öresundsbron iyo hay’adda gaadiidka gobolka Skåne. Dowladda qudheeda ayaa ogeyn sida dhabta ah ee go’aanka Danmark u saameyn doono safareyda ka tallowdo xadka labada dal.